Amarhe abuyayo, i-iPhone 13 iya kuba nendawo enkulu yokutshaja ngaphandle kwamacingo ngokutshaja umva | IPhone iindaba
Amarhe abuyayo, i-iPhone 13 iya kuba nendawo enkulu yokutshaja ngaphandle kwamacingo ngokutshaja okuphindayo
UKarim Hmeidan | | iPhone 13
Siphakathi ehlotyeni kwaye sele uyazi ukuba lixesha lamahemuhemu kwaye ufumane izinto kwiinguqulelo ze-beta zeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza kwezixhobo zeApple. NgoSeptemba iya kuba yinyanga apho sibona khona iinguqulelo zokugqibela, kwaye apho sibona ukuba iya kuba njani i-iPhone 13 elandelayo kwaye mhlawumbi nezinye izixhobo. Kwaye ngelishwa, ngoku i kunokwenzeka ukuba i-iPhone 13 elandelayo inendawo entsha yokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokubanakho ukutshaja kwakhona. Qhubeka ufunda ukuba sikunika zonke iinkcukacha.
Ngokwamahemuhemu amva nje, uApple wayeza kucinga Yenza i-Coil yokuShaja ngaphandle kwamacingo ePhambili kwi-iPhone elandelayo ye-13, le Ingawonyusa kakhulu umphezulu womhlaba apho kunokubangelwa khona ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Konke oku kuthethwa nguMax Weinbach kuyo yonke into iApplePro, kwesi sixhobo kuyangqina ukuba oku kunyuka kwekhoyili yomthwalo inokusetyenziselwa ukutshaja ngokutsha ngaphandle kwamacingo okutsha, into ethi ingavumela abasebenzisi ukuba babize izixhobo zokutshaja ngaphandle kwamacingo ezinje ngee-AirPods, Ukubeka emva kwe-iPhone. Into eyala "umhlobo" wethu kwizihlandlo ezidlulileyo UGurman echaza ukuba ukufika kwe-reversing wireless kwi-iPhone kwakungalindelekanga "kwikamva elikufutshane".
Ngamafutshane, amarhe amadala ahlala ebuya, kodwa inyani yile Iingxelo ezininzi zibonisa ukuba i-iPhone 12 sele ikwazi ukutshaja izixhobo ngokubuyisa umva ngaphandle kwamacingo, nangona usazi ukuba asinalo olu khetho lufumanekayo kuba iApple khange ilusebenzise, ​​kwaye ngekhe luphele luyenza. A Utshintsho kwikhoyili yokutshaja ngaphandle kwamacingo njengoko besitsho inokuba yintoni ekhokelela iApple ukubhengeza ukutshaja ngaphandle kwamacingo okutsha. Ewe, khumbula ukuba oku kubiza ngocingo ngaphandle kwamacingo iyafumaneka ngoku kwezinye izixhobo zefowuni, ezinje ngeSamsung, kwaye ndiyathandabuza ukuba yinto esetyenziswa ngabo bonke abasebenzisi. Ucinga ntoni ngale nto yokutshaja ngaphandle kwamacingo? Ngaba ucinga ukuba uza kuyisebenzisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » Amarhe abuyayo, i-iPhone 13 iya kuba nendawo enkulu yokutshaja ngaphandle kwamacingo ngokutshaja okuphindayo
Idlalwa njani i-pinball kunye nesicelo sikaGoogle